Boqorka Sacuudi Carabiya Oo Booqashadiisii U Horeysay Ku Tagay Dalka Masar + (Sawirro) | Berberatoday.com
Boqorka Sacuudi Carabiya Oo Booqashadiisii U Horeysay Ku Tagay Dalka Masar + (Sawirro)
Cairo(Berberatoday.com)-Boqorka Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan Bin Cabdul Casiis ayaa booqashadiisii u horeysay ku tagay dalka Masar, tan iyo markii uu la wareegay sanadkii hore dhaxalka boqortooyada, iyadoo ay u bilaabatay shan maalmood oo uu booqasho rasmi ah ku joogayo magaalada Qaahira.
Soo dhoweyn heerkeedu sareyso ayaa loogu sameeyay garoonka diyaaradaha Qaahira, halkaasoo uu ku soo dhoweeyay Madaxweyne Abdel Fattah al-Sisi, waxaana booqashadan loo arkayaa mid Boqor Salmaan uu taageero ugu muujinayo al-Sisi.
Boqortooyada Sacuudiga Carabiya ayaa taageertay Mr Sisi, kadib markii uu xukunka ka tuuray sanadkii 2013 Madaxweynihii sida dimoqraadiga loo soo doortay Maxamed Morsi oo ka tirsanaa Ururka Ikhwaanul Muslimiinka, kaasoo shaki badan ay ka qabtay Xukuumadda Riyadh.
Boqor Salman iyo Madaxweynaha Masar ayaa maalinta berri oo jimco ah lagu wadaa inay kulan rasmi ah ku yeeshaan qasriga Madaxtooyada, halkaasoo ay ku saxiixi doonaan 14 heshiis oo ku kacaya $1.5 bilyan oo dollar oo Sacuudiga ay maalgashi ku sameyneyso Masar.
Mashaariicda maalgashi ee Sacuudiga ku sameynayo Masar ayaa waxaa ka mid ah Gacanka Sinai.
Boqor Salman ayaa sidoo kale lagu wadaa in maalinta Axada uu khudbad u jeediyo Baarlamaanka Masar.
Ka sokow taageerada uu Sacuudiga siiyo Masaarida waxaa soo labeeya dalka isu taga Imaaraadka Carabta oo xulufo la ah Sacuudiga
Masar ayaa horay ugu biirtay isbaheysiga uu hogaamiyo Sacuudiga ee dagaalka kula jirta Kooxda Xuutiyiinta Yemen ee taageerada ka hesha dowladda Iiraan, Xukuumadda Masar ayaa sheegtay inay diyaar u tahay hadii loo baahdo ciidan dhulka ah inay u direyso Yemen, balse go’aankaas goor dambe ayay ka laabatay.